प्रविधिको चमत्कारः चीनमा फाइभ–जीबाटै २ सय किलोमिटर टाढाको शल्यक्रिया ! - OpticalKhabar
होमपेज सूचना प्रविधि प्रविधिको चमत्कारः चीनमा फाइभ–जीबाटै २ सय किलोमिटर टाढाको शल्यक्रिया !
DoroNepal Reporter 9:47 AM सूचना प्रविधि,
बेइजिङ (एजेन्सी) । फाइभ जीको उपयोगिता सम्बन्धमा विवादले अहिले अमेरिका र चीनबीच व्यापारयुद्ध जस्तै अवस्था छ । फाइभजीको क्रेडिट लिन तम्सिरहेका यी दुई मुलुकबीचको होडबाजीमा चीन एक कदम अगाडि देखिएको छ ।
Posted by DoroNepal Reporter at 9:47 AM